UGeronimo Stilton: Iincwadi | Uncwadi lwangoku
Akukho mathandabuzo UGeronimo Stilton kunye neencwadi zakhe zaziwa kwihlabathi liphela. Oko wayiqanjwa ngumbhali wayo, baye bawela imida. Ukongeza kwiincwadi, kukho ukuthengisa, uthotho, iicomics kunye neemveliso ezininzi ezenze eli saga laduma kwihlabathi.
Kodwa, Zingaphi iincwadi zeGeronimo Stilton ezikhoyo? Ngubani owayilwayo? Yintoni esinokuyifumana kuzo? Fumana yonke into kwaye ube noluhlu lwazo zonke iincwadi ezipapashiweyo zale "mouse edumileyo".
1 Ngubani owadala uGeronimo Stilton?
2 Uthetha ngantoni uGeronimo Stilton?
3 kutheni idume kangaka
4 UGeronimo Stilton: iincwadi abazikhuphileyo
4.1 Iincwadi ezikhethekileyo zeGeronimo Stilton
4.2 Geronimo Stilton amahlaya
4.3 amabali amnandi
4.5 IziKronike zobukumkani beFantasy
4.6 I-Tenebrax emnyama
4.7 Iimpuku zangaphambili
4.8 IiKnights zoBukumkani beFantasy
4.10 Amakrele ali-13
4.11 Abafundi bokuqala
4.13 Iziganeko ze-sherlock
4.14 Ezinye iincwadi zikaGeronimo Stilton
Ngubani owadala uGeronimo Stilton?
Umthombo: Ukuzibophelela kwe-Atresmedia
Umntu onike ubomi kuGerónimo Stilton, okanye ngakumbi owayemazi kwaye asebenzisana naye (utshilo ngokwakhe) U-Elisabetta Dami, umbhali waseTaliyane weencwadi zabantwana.
Uyintombi yomvakalisi uPiero Dami kwaye waqala kwihlabathi lokushicilela esemncinane kakhulu. Okokuqala, wakwenza oko njengomhloli-zimpazamo kwishishini lokushicilela, kodwa wafumana nexesha lokubhala, eneminyaka eyi-19, amabali akhe okuqala.
Ibali likaGeronimo Yavela kwixesha lakhe njengevolontiya kwisibhedlele sabantwana, apho wayila khona lo mlinganiswa ukuba abaxelele malunga nohambo lwakhe. Kwakunzima kakhulu kuye ukuxelelwa ukuba akanakuba nabantwana, kodwa kunokuba adandatheke, eyona nto wayenzayo yayikukuxhasa abanye abantwana. Ke, waqala ukubhala amabali ngalo mlinganiswa, kwaye waqala ukuqonda ukuba baye baphila ngakumbi kwaye izigulo zabo zaphiliswa ngokukhawuleza, kungoko waqhubeka. Ukongeza, le mouse ijongana nemilinganiselo efana nobuhlobo, intlonipho, uxolo, njl. kuwo onke amabali abo, esoloko enoburharha.
Xa zazipapashwa eItali zaziyinto nje eqhelekileyo, nto leyo eyayithetha ukuba zaguqulelwa ngexesha elifutshane. Ngoku bakwiilwimi ezingama-49 ezahlukeneyo kwaye bathengise izigidi zeekopi kwihlabathi liphela.
Bambalwa abazi ukuba u-Elisabetta ngumfazi onomdla kakhulu, ukuya kwinqanaba lokuba abe nelayisenisi yokuqhuba kunye nelayisenisi ye-paratrooper, ehamba yedwa kwihlabathi kwaye ethatha inxaxheba kwikhosi yokusinda, i-rally kwiNtlango ye-Sahara okanye ukuwela i-Afrika kwindlela engekho endleleni, ethatha inxaxheba. kugqatso lwe-ultramarathon enqumla iSahara kunye neNew York Marathon.
Ewe, kwiincwadi zakhe zeGeronimo Stilton awuyi kulibona igama lakhe kuba uhlala esayinela ukuba nguGeronimo Stilton. Isizathu kukuba, kuye, «uGeronimo kunye nam singabadibanisi», ngoko ke "akayithathi ikhredithi".
Uthetha ngantoni uGeronimo Stilton?
Enye yempumelelo enkulu umbhali abenayo noGeronimo Stilton kukudala umlinganiswa oqinileyo, kuba ayigxininisi kubomi bukaGeronimo kuphela, kodwa ngokoqobo yonke into engobomi bakhe, elidlulileyo nelikhoyo (kwaye kwezinye iimeko kwixesha elizayo) iyaziwa. ) .
Ukuqala, UGerónimo unedigri kwiRathology yeMouse Literature kunye neComparative Archeo-Mouse Philosophy. Ube ngumlawuli wephephandaba kunye nokusasazwa okukhulu kweRatonia (apho ahlala khona), i-Eco del Roedor, iminyaka engama-20. Kwaye ngengxelo yakhe, Imfihlelo yobuncwane obulahlekileyo, wanikwa iMbasa yeRatitzer. Kodwa asikuphela kwayo enayo; ngokunjalo neMbasa yeAndersen ka-2001 yoMlinganiswa woNyaka; kunye neMbasa ye-eBook ka-2002 kwenye yeencwadi zakhe.
Uwathanda kakhulu amabali (awaxelela umtshana wakhe uBenjamin), iirinds zeRenaissance Parmesan, kunye negalufa.
Akayena umlingiswa "ongaqhelekanga", ekubeni ukuba sele esebenza kwiphephandaba iminyaka engaphezu kwe-20, ubuncinane usondele kuma-40 kwaye sithetha ngeencwadi zabantwana-zolutsha ezinomntu "omdala".
Singatsho ukuba Iincwadi zikaGeronimo Stilton ziwela phakathi kohlobo lwe-adventure. Kwaye kukuba kuzo zonke iincwadi zakhe kukho amabali okuhamba, ihlabathi leengcamango, imbali, njl. Olunye lweempawu ezikhethekileyo zezi ncwadi kukuba azisonwabisi kuphela, kodwa zikwabonelela ngedatha yembali, inkcubeko kunye nokujongana nemilinganiselo (into eyenziwa ziincwadi ezimbalwa namhlanje).
Ngokumalunga nobudala obucetyiswayo bokufunda ezi ncwadi, eyona ingcono isusela kwi-8 yeminyaka ubudala, nangona abantwana abaninzi bezifunda nangaphambi koko. Ngokuqhelekileyo ukusuka kwiminyaka eyi-12-14 bayayeka ukubathanda.
kutheni idume kangaka
Alithandabuzeki elokuba uGeronimo Stilton yenye yeempuku ezaziwa kakhulu nezidumileyo. Isenokungafikeleli kwinqanaba leMickey Mouse, kodwa ikufutshane. Yaye abaninzi basenokuzibuza isizathu sokuba izuze udumo olunjalo.
Inyaniso yeyokuba umlingiswa kaGeronimo, kunye nenyaniso yokudala umlinganiswa oneempawu ezininzi zabanye abalinganiswa boncwadi (abanjengoSherlock Holmes, umzekelo, okanye abanye abalinganiswa abasebenzisa ingqiqo kunye nokuqaphela) abantwana baya kuzithanda izinto abazifunayo, kunye nazo, nokufunda.
Sinokuthi iphucule abalinganiswa beklasikhi ukuyisondeza kwimihla yethu, evumela abantwana ukuba bachonge ngcono ngakumbi ngesakhiwo kwaye, kunye nalo, ukonwabele ukufunda ngakumbi.
UGeronimo Stilton: iincwadi abazikhuphileyo
Ukusinceda kwiWikipedia, sithathe uluhlu lweencwadi ezipapashiweyo ukuza kuthi ga ngoku nguGeronimo Stilton, ukuba sivelisa kwakhona apha ukuze ungaya kuzikhangela.
1. Igama lam ndinguStilton, uGeronimo Stilton
2. Ekufuneni ummangaliso olahlekileyo
3. Umbhalo-ngqangi kaNostratus ongaqondakaliyo
4. Inqaba yeLiwa elihlabayo
5. Uhambo oluphambeneyo oluya eRatikistan
6. Olona gqatso luphambeneyo ehlabathini
7. Uncumo lukaMona Ratisa
8. Igalari yeeKati zamaPirate
9. Susa loo milenze, Caraqueso!
10. Imfihlelo yobuncwane obulahlekileyo
11. Iimpuku ezine kwihlathi elimnyama
12. UMoya weNdlela engaphantsi komhlaba
13. Uthando lufana netshizi
14. Inqaba yaseZampachicha Miaumiau
15. Bambelela kwiindevu zakho ... Ratigoni uyeza!
16. Kumzila we-yeti
17. Imfihlelo yephiramidi yetshizi
18. IMfihlo yoSapho lweTenebrax
19. Ubufuna iholide, Stilton?
20. Impuku efundileyo ayiziphosi iimpuku
21. Ngubani oqweqwedise iLánguida?
22. Imeko engaqhelekanga yempuku enukayo
23. Impuku eGoofy eGqibela!
24. Enjani yona iholide yempuku!
25. IHalloween… iyoyikeka!
26. Hayi indlela emnandi ngayo eKilimanjaro!
27. Iimpuku ezine kwi-Wild West
28. Imidlalo engcono kakhulu yeeholide zakho
29. Ityala elimangalisayo loBusuku beHalloween
30. YiKrisimesi, Stilton
31. Ityala eliMmangaliso leSikwidi esikhulu
32. Ngewaka leentshizi zebhola ... ndiphumelele i-lotorratón!
33. Imfihlelo ye-Emerald Eye
34. Incwadi yeMidlalo yokuHamba
35. Usuku olunempuku olukhulu… lobuntshatsheli!
36. Isela letshizi elingaqondakaliyo
37. Ndiza kukunika ikarati!
38. Ithontsi leempukane zokubala
39. Imeko Engaqhelekanga yeVolcano Enukayo
40. Masiwusindise umnenga omhlophe!
41. Umama ongenagama
43. I-Agent eyimfihlo enguZero Ka
44. Intlambo yeMigodi yamathambo
45. Olona gqatso luphambeneyo
46. ​​Uhambo lokuya kwiiNgxangxasi zeNiagara
47. Imeko engaqondakaliyo yeMidlalo yeOlimpiki
48. ITempile yeRuby yoMlilo
49. Ityala elimangalisayo leTiramisu
50. IMfihlo yeChibi Elichithiweyo
51. Imfihlelo yeeElves
52. Andiyompuku enkulu!
53. I-Giant Diamond Heist
54. Intsimbi yesibhozo…iklasi yamatshizi!
55. Imeko engaqhelekanga yempuku ephuma ngaphandle kwengoma
56. Ubuncwane be-Black Hills
57. Imfihlelo yeperile enkulu
58. UGeronimo ufuna indlu
59. Umxhelo opheleleyo, Geronimo!
60. Inqaba yamabali ali-100
61. Imfihlelo yeRuby yaseMpuma
62. Impuku eAfrika
63. Ukusebenza kwePanettone
64. Imfihlelo yeViolin engekhoyo
65. Umdlalo wokugqibela weNdebe yeSuper… eRatonia!
66. Iqhina eMeadow
67. Ubusuku bomlingo wee-elves
68. Ukhuphiswano lwabapheki abakhulu
69. Ityala elingaqhelekanga lesela leTshokoledi
70. I-Case engaqhelekanga yeePimples eziBlue
71. Ukuzingela iNcwadi yeGolide
72. Imfihlelo ye-matrioskas ezisixhenxe
73. Ubuncwane baseRapa Nui
74 Kukho i pirate kwi-Intanethi
75. Imfihlelo kaLeonard
76. Iholide embi eVilla Roñosa
77. Imfihlelo yePapyrus emnyama
78. Isivusi...impuku phezu kwebhodi!
79. Umhla kunye nemfihlakalo
80. Yhuu, hayi indlela ekumnandi ngayo eHawaii!
81. Ubusuku beeNgcuka Pumpkins
82. Ndiza kukunika ubusi, Stilton!
83. Umqeqeshi ofunwayo kwiiOlimpiki
84. Umoya weColosseum
85. Usuku lokuzalwa… ngemfihlakalo!
Iincwadi ezikhethekileyo zeGeronimo Stilton
1. INcwadana yoXolo
2. Ihlabathi elimangalisayo ku-Oliver
3. EBukumkanini beFantasy
4. Uhambo lwexesha
5. Buyela kwiNdawo yeFantasy
6. Uhambo lwesithathu ukuya eBukumkanini beFantasy
7. Uhlaselo olukhulu lweRatonian
8. Uhambo lwesine ukuya eBukumkanini beFantasy
9. Uhambo lwesihlanu ukuya eBukumkanini beFantasy
10. Uhambo lweXesha 2
11. Uhambo lwesithandathu ukuya eBukumkanini beFantasy
12 Umhla wencwadi
13. Imfihlelo yenkalipho
14. Uhambo lweXesha 3
15. Uhambo lwesixhenxe ukuya eBukumkanini beFantasy
16. Uhambo lweXesha 4
17. Uhambo lweSibhozo kwiNdawo yeFantasy
19. Uhambo lweXesha 5
20. Incwadi Enkulu yoBukumkani beFantasy
21. Uhambo lweXesha 6
22. Uhlangulo kummandla weFantasy—Uhambo Lwesithoba—
23. Uhambo lweXesha 7
24. Ukubuyela okukhulu kwiNdawo yeFantasy
25. Ukudibana nosapho lakwaPayasa
26. Uhambo lweXesha 8
27. Ukubuyiselwa kwakhona koBukumkani beFantasy—uhambo lweshumi—
28. Uhambo lweXesha 9
29. Imfihlelo yoMhlaba weFantasy—uhambo lweshumi elinanye—
30. Uhambo lweXesha 10
31. ISiqithi seeDragons kwiNdawo yeFantasy—uhambo lweshumi elinesibini—
32. IiDinosaurs zeMishini. ixesha lokuhamba 11
33. Iimvavanyo eziSixhenxe zoMmandla weFantasy—Uhambo lweshumi elinesithathu—
34. Umnqophiso wePirates. ixesha lokuhamba 12
35. Abagcini bommandla weFantasy—uhambo lweshumi elinesine—[Iincwadi ezikhethekileyo zeGeronimo Stilton]
Geronimo Stilton amahlaya
1. Ukufunyanwa kweMelika
2. Ubuqhophololo baseColosseum
3. Imfihlelo ye-sphinx
4. I-Ice Age
5. Emanyathelweni kaMarco Polo
6. Ngubani obe iMona Lisa?
7. Iidayinaso zisebenza
8. Umatshini weencwadi ongaqhelekanga
9. Yidlale kwakhona, Mozart!
10. UStilton kwiiOlimpiki
11. ISamurai yokuQala
12. Imfihlakalo ye-Eiffel Tower
13. Oyena loliwe ukhawulezayo entshona
14. Impuku enyangeni
15. Enye yazo zonke kwaye zonke ze-Stilton!
16. Izibane, ikhamera… kunye nentshukumo!
17. Umjelo wamanzi amdaka uyanuka
2. Ehlabathini lonke ngeentsuku ezingama-80
3. I-Adventures yase-Ulysses
4. Abasetyhini abancinci
5. Incwadi Yehlathi
6. URobin Hood
7. Ikhwelo lehlathi
8. Izigigaba zikaKumkani uArthur
9. IiMusketeers eziThathu
10. I-Adventures kaTom Sawyer
11. Iintsomi ezingcono zabazalwana bakaGrimm
12. UPeter Pan
13. I-Adventures ye-Marco Polo
14. Iihambo zikaGulliver
15. Imfihlelo yaseFrankenstein
16. UAlice kwi-Wonderland
17. Sandokan. Izingwe zaseMompracem
18 Amashumi amabini amawaka eengwevu phantsi kolwandle
21. I-White Fang
22. I-Adventures yeRobinson Crusoe
23. Igadi eyimfihlo
24. Ingoma yeKrisimesi
25. I-Adventures ye-Black Corsair
27. Ii-Adventures zikaSherlock Holmes
28. Abo bafazi bancinci
29. Utolo Olumnyama
30. Uhambo oluya kwiziko loMhlaba
31. UKumkanikazi wekhephu
32. I-Adventures ye-Huckleberry Finn
33. Isiqithi esimangalisayo
1. Abakhuseli beSixeko saseMuskrat
2. Uhlaselo lwezilo ezikhulu
3. Uhlaselo lweqakamba zeMole
4. Super nosy vs. ezintathu ezoyikekayo
5. Umgibe weedinosaurs ezinkulu
6. Imfihlelo yesuti etyheli
7. Iimpuku zekhephu ezenyanyekayo
8. I-alamu, iyanuka!
9. Umntu oxakekileyo kakhulu kunye nelitye lenyanga
10. Kukho into enuka kakubi ePutrefactum!
11. Ukuziphindezela kwixesha elidlulileyo
IziKronike zobukumkani beFantasy
1. Ubukumkani obulahlekileyo
2. Ucango lweHaunted
3. IHlathi eliHawunted
4. Umsesane wokukhanya
5. Isiqithi esithe chatha
6. IMfihlo yeeKnights
1. Iziporho ezilishumi elinesithathu zeTenebrosa
2. Imfihlelo kwiNqaba yoKhakhayi
3. Ubuncwane bePirate yoMoya
4. Masisindise ivampire!
5. I-rap yoloyiko
6. Ityesi ezele ziziporho
7. I-Goosebumps kwi-roller coaster
8. Imfihlelo eyoyikekayo yaseBurialton
1. Thatha imilenze kwiLitye loMlilo!
2. Jonga imigca, iimeteorite ziwa
3. Ngewaka le mammoths, umsila wam uyaqhaqhazela!
4. Uphezu kwentamo yakho kwi-lava, Stiltonut!
5. I-Trotosaurus yam yaphukile
6 Ngokuba iwaka lamathambo, hayi, ubunzima bebrontosaurus!
7. Idayinaso eyozelayo, akukho kubambisi impuku!
8. I-Tremendosaurus iyatshaja!
9. I-Bitesaur elwandle…Kuxabise ukuhlangula!
10. Kunetha iindaba ezimbi eSiltonut!
11. Ukukhangela i-oyster ye-megalithic!
12. I-Gluttonous pulposauria... ibeka engozini umsila wam!
13 Ngenxa yewaka lamatye... Hayi indlela ibhaluni enuka ngayo!
14. Qaphela uboya, iBzot Enkulu iyeza!
15 Owu, owu, uStiltonut, akusekho bisi lukhulu!
16. Musa ukuzivusa iimpukane zikaRonf Ronf!
17 Ngubani na owebe amanzi omlambo?
IiKnights zoBukumkani beFantasy
1. I-labyrinth yamaphupha
2. Ikrele Lekamva
3. Ukuvuka kwezigebenga
4. Isithsaba somthunzi
1. Usongelo lweplanethi iBlurgo
2. Umphambukeli kunye noCaptain Stiltonix
3. Uhlaselo lwePonf enganyamezelekiyo
4. Umngeni weGalactic kwisohlwayo sokugqibela
5. Iplanethi yee-cosmosaurs ezinemvukelo
6. Imfihlelo yeplanethi etshoneyo
7. Ingozi, inkunkuma yasesithubeni!
8. Ubusuku bomlingo beenkwenkwezi ezidanisayo
9. IStiltonix vs. iMonster yeSlurp
10. Umngeni we-Stellar Mustache
11 Kwaye ngaphezu koko, ndiya kukuluma umsila, Stiltonix!
1. Imfihlelo yenamba
2. Imfihlelo yephoenix
3. Imfihlelo yengwe
4. Imfihlelo yengcuka
1. IHood yokukhwela eBomvu encinci
2. UPeter Pan
1. Iatlasi yam yokuqala yezilwanyana
2. Ubusazi ukuba…? incwadi yam enkulu ye curiosities
1. Abaqalayo, Stilton othandekayo! [Izinto ezenzekayo eSherlocko]
Ezinye iincwadi zikaGeronimo Stilton
Ibali elithambileyo, elithambileyo, elithambileyo phantsi kwekhephu
Awona maqhula ahlekisayo
Awona maqhula ahlekisayo 2
Awona maqhula ahlekisayo 3
Eyona morrocotudos jokes 4. Izilwanyana ezikhethekileyo!
Eyona ndlela iphezulu yeempuku
1000 iziqhulo ukugqabhuka yintsini. Morocco!
Eyona dessert super mousey
Incwadi yokubaleka. Uvaleleke... endlwini yam!
Gcina iplanethi! Fumanisa ukuba kutheni ubalulekile
Incwadi yokubaleka. Uvaleleke… ngaphakathi kwimyuziyam!
Zingaphi iincwadi zeGeronimo Stilton ozifundileyo?
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » Iintlobo » Iincwadi zoLutsha » UGeronimo Stilton: Iincwadi